Kiddie Ride Factory - တရုတ် Kiddie စီးနင်းထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ
ဒင်္ဂါးပြားမှ Lollipop အရောင်းဂိမ်းစက်သကြားလုံး ...
အသစ်ရောက်ရှိလာဒင်္ဂါးပြား Capsule ကစားစရာအရောင်းစက်
ဒင်္ဂါးပြားသည်ကစားသမား (၆) ဦး အတွက်အကြွေစေ့တွန်းထိုးစက်ကိုအသုံးပြုသည်
အပန်းဖြေ Euqipment တစ်ခုတည်းအကြွေစေ့တွန်းဂိမ်းစက်
Pandora Arcade ဂိမ်းစက်အရောင်းအဝယ်သည် ...
ဒင်္ဂါးသည် 32LCD pandora's box arcade games ...
အသစ်ရောက်ရှိသည့်အကြွေစေ့သည် 3D kiddie ride dinosaur sh ...
NEW ARRIVAL အကြွေစေ့ဖြင့်ချစ်စရာကောင်းသောလေယာဉ် ၃ စီး kiddie စီးနင်း ...
အသစ်ရောက်ရှိလာသည့်အကြွေစေ့ဖြင့် 3D kiddie ride -fire truck ...
အသစ်ရောက်ရှိလာသောအကြွေစေ့သည်ရဲကားဖြင့် 3D kiddie စီးနင်း ...
ဒင်္ဂါးပြားမှလှည့်လည် 3d Motor Kiddie Ride ဗီဒီယိုဂိမ်းများ ...
ဒင်္ဂါးပြားမှ 3d မြင်းခုန်စီးစီးနင်းနိုင်သည့်ဂိမ်းများ Swing ...
ဒင်္ဂါးပြားသည်ဂိမ်းစက် 3d ဗွီဒီယိုဂိမ်း Swing Machine ဖြစ်သည်
အသစ်ရောက်ရှိလာသောအကြွေစေ့သည်ကားပြိုင်ကားစက်ဖြင့် 3D kiddie စီးသည့်ရဲကားကိုအသုံးပြုခဲ့သည်
1. ထုတ်ကုန်များ၏သီးသန့်ဒီဇိုင်း၊ လှပပြီးရက်ရက်ရောရော၊ လှပသောပုံသဏ္,ာန်၊ ရောင်စုံအလင်းရောင်၊ အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
Kiddie စီးနင်းစက်နှင့်ပြိုင်ကားဂိမ်း၏စုံလင်သောပေါင်းစပ်မှု， အပြန်အလှန်ကစားသောဂိမ်းများ၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရစဉ်ကလေးများသည်လွှဲခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှုကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးဝင်ငွေမြင့်မားတယ်။
၁။ ချစ်ဖွယ်အသွင်အပြင်၊ အံ့သြဖွယ်တေးဂီတ၊
၂။ ကားမောင်းနေစဉ်၊ အပြန်အလှန်ပျော်စရာပျော်မွေ့နေစဉ်ကလေးများ။ ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးဝင်ငွေမြင့်မားတယ်။
ဒင်္ဂါးပြားသည်ဂိမ်းစက် 3D / MP5 Kiddie စီးစက်
ဒင်္ဂါးသည် 3D Kiddie ဖြင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းစက်ကိုစီးသည်
အသစ်ရောက်ရှိလာသောအကြွေစေ့သည်သေနတ်ပစ်ဂိမ်းစက်ဖြင့် 3D kiddie ride -fire truck ဖြစ်သည်
NEW ARRIVAL အကြွေစေ့သည်သေနတ်ပစ်ထားသောလေယာဉ်ဂိမ်းစက်ဖြင့်ချစ်စရာကောင်းသောလေယာဉ် 3D ကလေးစီးနင်းလည်ပတ်မှုဖြစ်သည်
Kiddie စီးနင်းစက်နှင့်လေယာဉ်ဂိမ်းများကိုရိုက်ကူးခြင်း，အပြန်အလှန်ကစားသောဂိမ်းများ၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရစဉ်ကလေးများသည်လွှဲခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှုကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးဝင်ငွေမြင့်မားတယ်။
အသစ်ရောက်ရှိလာသောအကြွေစေ့သည် 3D Kiddie စီးနင်းသောဒိုင်နိုဆောရိုက်ကူးသည့်ဘောလုံးဂိမ်းစက်ဖြစ်သည်
2. Kiddie စီးသည့်စက်နှင့်ဘောလုံးကစားနည်းများကိုအကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ထားသည့်အတွက်ကလေးများသည်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောဂိမ်းများ၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားနေရစဉ်လွှဲခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားကြရသည်။ ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးဝင်ငွေမြင့်မားတယ်။
ဒင်္ဂါးသည် 3D Horse Kiddie စီးနင်း Video Game Swing စက်ဖြင့်လည်ပတ်သည်
ဒင်္ဂါးပြားသည် 3d Kiddie Ride ဗီဒီယိုဂိမ်းများ Swing Machine ဖြင့်လည်ပတ်သည်